Zlatan Ibrahimovic oo rumeysan in AC Milan ay ku guuleysan karto horyaalka Serie A kaddib guushii Derby della Madonnina – Gool FM
(Milan) 18 Okt 2020. Zlatan Ibrahimovic ayaa rumeysan in Kooxda AC Milan ay ku guuleysan karto horyaalka Serie A kaddib guushii ay xalay ka gaareen Inter Milan ee Derby della Madonnina.
Ibrahimovic ayaa soo jeediyey in AC Milan ay u tartami karto hanashada horyaalka Serie A kaddib guushii ay ka gaareen xalay oo Sabti ahayd kooxda ay isku Magaalada yihiin ee Inter Milan.
Xiddigan reer Sweden ayaa labo gool dhaliyey qeybta hore ee ciyaarta, taasoo ku filnaatay in AC Milan ay gaarto guusheedii ugu horreysay ee Derbiga ah horyaalka muddo afar sanadood ah kaddib.
Ibrahimovic oo kaliya sanad kale ku qaatay Talyaaniga dhowaan kaddib waayihiisii LA Galaxy ayaa si buuxda u aaminsan in Milan ay lahaan karto xilli ciyaareed lagu xasuusato kaddib guushii wayneed ee ay ku gaareen garoonka San Siro.
“Milan ma guuleysan derbigaan muddo afar sanadood ah, gurigeyga ayaan ku xayirnaa labo isbuuc, sidaas darteed waan gaajeysnaa wayna muuqatay.” Ibrahimovic ayaa sidaas u sheegay Sky Sport Italia.
“Waa yaraaday dareenkeygii dhadhaminta, laakiin saddexdii maalmoodba mar ayaan xirxiray, qofna ima hor istaagi doono inaan ciyaaro kulanka Derbiga.
“Waan ka xumahay in rigoorada la badbaadiyo, laakiin waxa muhiimka ah ayaa ah in kooxdu guuleysatay, aniga ayaa ugu da ‘weyn kooxda, waxaan dareemayay mas’uuliyad badan, waana jeclahay dareenkaas, maadaama ay dhamaantood raacayaan hoggaankayga ayna u hammuun qabaan inay guuleystaan.”
Ibrahimovic ayaa intaa ku daray inuu aaminsanaa inuu ku laaban karo Korono Fayras, isla markaana uu diyaar u yahay inuu sii wato ka ciyaarista heerka sare, inkastoo uu 39 sano jir yahay.